10 तपाईंको तरिकाले ईकमर्स सेल्स प्रोटेन्सनमा वृद्धि गर्न को लागि Semalt
वास्तवमा, ईकमर्स व्यवसाय मालिकहरूले धेरै पैसा कमाउँदैछन्उनीहरूको उत्पादनबाट। स्टेटिस्टाले हालैको अध्ययनले देखाएको छ कि खुद्रा ई-कॉमर्सस विश्वव्यापी बिक्री2018 मा 2.86 ट्रिलियन अमेरिकी डलर को राशि हुनेछ। दुर्भाग्यवश, तपाईं सिर्फ एक ई-कॉमर्सस बनाउदैनपसल र ग्राहकहरूलाई तपाईंको साइट बाढी गर्न आशा गर्नुहोस्। तपाईंले सफल मार्केटिंग अभियानहरू लगाउन आवश्यक छविक्रेताहरुलाई रुचि आकर्षित गर्न को लागि।
सुसमाचार यो हो कि सेल्टल्ट डिजिटल सेवा द्वारा प्रमाणित निम्न मार्केटिंग रणनीतिहरु संग तपाईंआफ्नो ईकमर बिक्री बढाउनुहोस्। इवान कन्नोलोभ, ग्राहक सफलता प्रबन्धक सेल्टल्ट ले महत्त्वपूर्ण सुझाव दिन्छकुन रणनीतिमा ईकमर्स स्टोरहरूले समृद्धिको लागि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
1। माथि बेचेको र क्रस बेचन गर्ने
माथि बिक्री र क्रस बिक्रीहरू निश्चित-आगो तरिकाहरू छन् जुन तपाइँले अनलाइन बिक्री बढाउन काम गर्न सक्नुहुनेछ। क्रस बिक्रीग्राहकलाई कुन कुरामा खरिद गरिरहेको छ संग सम्बन्धित उत्पादनहरू शुरू गर्ने तरिका हो। यसले एक दिन्छबाट छनौट गर्न धेरै पूरै पूरै उत्पादन ग्राहक। माथि बेचेर अधिक बिक्रि बिक्री गर्ने कार्य होएक उत्पादनको संस्करण जुन ग्राहक खरिद गर्दछ। यो विधिले तपाईंको ग्राहकलाई समान उत्पादन हेर्न अनुमति दिन्छउन्नत सुविधाहरु र उच्च मूल्य संग।
यी बिक्री प्रविधिको ग्राहकहरू अन्य उत्पादनहरू खरीद गर्न प्रोत्साहित गर्न डिजाइन गरिएको छ। सत्य यो कहिले हुन्छग्राहकहरूले उनीहरूको आवश्यकता भन्दा बढी देख्छन्, उनीहरूलाई अधिक खरीद गर्न उत्प्रेरित हुनेछन्। धेरै अध्ययनहरू देखाइएका छन्कि माथि बिक्री र क्रस बिक्री ग्राहकहरु को लागि फिर्ता आउन को लागि प्रोत्साहित गर्दछ।
2। तपाईंको वेबसाइट डिजाइन सुधार गर्नुहोस्
आजको डिजिटल युगमा, तपाइँलाई संभावित ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न र संलग्न गर्न अनुकूल वेबसाइट डिजाइन चाहिन्छ। तपाईंकोईकमर्स स्टोर कम्पनीको भाग हो, र यसको डिजाइनले तपाइँको ब्रान्ड कसरी व्यावसायिक छ भनेर प्रतिबिम्बित गरेको छ।वास्तवमा, तपाईंको प्रोमोशनल अभियानहरू तपाईंको स्टोरबाट पनि सुरु हुनुपर्छ। सेल्टल्ट विशेषज्ञहरू हटाइएका छन्तथ्य यो हो कि ग्राहकहरु को प्रायः अनलाइन स्टोर देखि बचें यदि यो महत्वपूर्ण अनुकूलन को कमी हो।
एक राम्रो तरिकाले डिजाइन गरिएका ई-कॉमर्सस स्टोरको निर्माण गर्ने प्रतियोगिहरुमा पुग्न एक महत्त्वपूर्ण कदम हो। यदि तपाईं हुनुहुन्छ भनेतपाईंको स्टोर पुन: पेस गर्ने योजना बनाइदिनुहोस्, त्यसपछि निश्चित गर्नुहोस् कि यसमा एक उत्तरदायी डिजाइन छ, जसले ग्राहकलाई एक दिन्छअद्भुत खरीदारी अनुभव। वास्तवमा, तपाईले अझ बढि बिक्री चलाउनुहुनेछ जब तपाई यसलाई सजिलो बनाउनुहुन्छनेविगेट गर्नुहोस र वेबसाइट मा उत्पादनहरु को खोज्नुहोस।
3। तपाईंको साइट मोबाइल अनुकूलन बनाउनुहोस्
पछिल्लो केहि वर्ष भित्र, नयाँ ट्याब्लेट र स्मार्टफोन बजारमा आउँदै छ।उल्लेखनीय रूपमा अनलाइन बिक्रेताहरूको संख्या बढ्यो। अध्ययनले मोबाइल बिक्रेताहरूको संख्या देखाउँछडेस्कटप प्रयोगको भन्दा बढी छ। यस डिजिटल युगमा, तपाईंको ईकमोरस स्टोर पुरा तरिकाले अपनाईएको छविभिन्न मोबाइल उपकरणहरूमा तपाईंको व्यवसाय सफलताको आवश्यक भाग हो।
Google ले वेबसाइटहरूको लागि मोबाइल खोज रैंकिंग पनि बढाउँछ जसले मोबाइल उपकरणहरूमा उचित प्रदर्शन गर्दछ।तपाईंको हालको वेबसाइट साइटको मोबाइल संस्करण सिर्जना गर्नको लागि तपाई रूपान्तरण प्लेटफार्म वा मोबाइल प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछप्लगइनहरू एक मोबाइल अनुकूल ई-कॉमर्सस भण्डार सिर्जना गर्दै एक राम्रो तरिका हो जुन तपाईं आफ्नो व्यवसाय बेवास्ता गर्न सक्नुहुनेछमोबाइल विक्रेताहरु लाई। स्टोरको मोबाइल अप्टिमाइजेसन गर्न, तपाईले रूपान्तरण दरहरू बढाउन र बिक्री बढाउनुहुनेछ।
4। गुणस्तरको उत्पाद छविहरू प्रयोग गर्नुहोस्
तस्विरहरू थप्नका लागि केवल कुनै पनि छवि छवि प्रयोग नगर्नुहोस्। तपाईंको उत्पादनको छविहरू हुनुपर्छएक उच्च गुणस्तर। यो साँचो हो कि पेशेवर उत्पादन छविहरू प्राप्त गर्न चुनौतीपूर्ण कार्य हुन सक्छ, तरयो पनि सत्य हो कि उनि आफ्नो स्टोर मा संभावित ग्राहकहरु लाई आकर्षित गर्न सक्छन्। हाम्रा विशेषज्ञहरूले धेरै साबित गरेका छन्कहिलेकाहीमा जुम-इन विकल्पहरूसँग भित्री वस्तु छविहरू थप्न संभावित ग्राहकहरूलाई उत्पाद खरीद गर्न प्रोत्साहन दिन्छ।
5। अनुकूलन उत्पादन पृष्ठ विवरण
तपाईंको उत्पादन पृष्ठ विवरणले ग्राहकलाई खरिद गर्न को लागी सम्भावना छ। त्यो निश्चित गरतपाईंले उपयोगी सुविधाहरू वर्णन गर्नुभएको छ जुन ग्राहकहरूलाई रुचि राख्नुहुन्छ। तिनीहरूलाई अगाडी उत्प्रेरित राख्नुहोस्भान्सा। अमेजन जस्तै सबैभन्दा लोकप्रिय ईकमर्स साइटहरू बिक्री सुधार गर्न आफ्नो उत्पादन प्रमुख विशेषताहरू देखाउँछन्।
विवरणहरू राम्ररी परिभाषित हुनुपर्छ ताकि तिनीहरूले पढ्ने कुनै पनि संभावित ग्राहकलाई प्रोत्साहित गरिनेछकारवाही गर्न। तपाईं उत्पादनको मुख्य विशेषताहरू प्रदर्शन गर्न आकर्षक छोटो बुलेटहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै संदेह छैनकि तपाईं बिक्री को प्रोत्साहन दिइन्छ जब धेरै बिक्री मा हराउनेछग्राहकहरु लाई खरीद गर्न को लागि विवरण मा छिपा छ।
6। लघु प्रोमोशनल उत्पादन भिडियोहरू सिर्जना गर्नुहोस्
भिडियो अभियान धेरै ई-कॉमर्स पसलहरूको एक महत्त्वपूर्ण मार्केटिङ रणनीति हो जुन यो प्रयोग भएको थियोबिक्री बढाउनुहोस्। आजका मोबाइल-सक्षम उपभोक्ताहरू भिडियोहरू अन्य प्रकारका भन्दा बढी हेरेर मनपर्छसामाग्रीको। तपाईंको उत्पादनहरूको रोचक छोटो प्रचार भिडियोहरू सिर्जना गर्नुहोस्, महत्त्वपूर्ण समावेश गर्नुहोस्तपाईंको उत्पादनका विशेषताहरू जुन ग्राहकहरूको ध्यान खिच्न सक्छ। यी भिडियोहरू विभिन्न उत्पादन वेब पृष्ठहरूमा एकताबद्ध गर्नुहोस्।
तपाईं एक्सपोजर बढाउनको लागि सबै लोकप्रिय भिडियो साइटहरूमा उत्पाद भिडियोहरू अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। नगर्नुहोस्भिडियोको शीर्षक र विवरणमा खोजशब्दहरू थपेर एसईओका लागि तपाइँको भिडियोहरू अनुकूलन गर्न बिर्सनुहोस्। तिमीतपाईंको वेबसाइट ठेगानाले ट्राफिकलाई ड्राइव गर्न विवरणमा पाठको रूपमा थप्न सक्छ।
7। एक अद्वितीय मूल्य प्रस्ताव
ईकमर्स क्षेत्रमा अवस्थित ठूलो विविधताले यसलाई कम्पनीका लागि कठिन बनाउँछ।प्रतिस्पर्धाबाट आफैलाई अलग गर्न। कुनै पनि कुराले तपाइँलाई आफ्नो उत्पादन कसरी बेच्न सक्दछके हो, त्यहाँ सम्भवतः अर्को पसल त्यहाँ छ, जुन त्यहि वा यस्तै प्रस्ताव गरिरहेको छतपाईंको लक्षित बजारमा उत्पादनहरू। यदि यो मामला हो भने, तपाई आफ्नो ब्रान्ड बनाउन के गर्न सक्नुहुन्छहजारौं अन्य ब्रान्डहरूको दायराबाट खडा हुनुहुन्छ? एक अद्वितीय मूल्य प्रस्ताव यो के होतपाईंको ब्रान्ड विशेष बनाउनेछ। तपाईलाई राम्रो अनोखी मान प्रस्ताव राख्नु पर्छ कि ठेगानाहरूतपाईंको उत्पादन मूल्य। यसलाई उपलब्ध गराउनु, तपाईं प्रतिस्पर्धामा उत्कृष्टता पाउनुहुनेछ, र नेतृत्वको फाइदाहरूको आनन्द लिनुहुनेछ।
एक अनोखी मूल्य प्रस्ताव तपाईंको होमपेज, उत्पाद पृष्ठ, र विज्ञापनमा एकीकृत गर्न सकिन्छपृष्ठ रूपान्तरण दर बढाउन। तपाईंको ब्रान्डले कुन कुरालाई अन्यबाट अलग बनाउँछ भन्ने ज्ञान पाउँछब्रान्डहरूले तपाईंलाई सफल ईकमर व्यवसाय चलाउन मद्दत गर्नेछ। यो रणनीतिले तपाईलाई तपाइँका प्रतियोगिहरुबाट अलग गर्न मद्दत गर्दछ।
8। प्रस्ताव र नि: शुल्क र सजिलो रिटर्न
यस मार्केटिंग रणनीतिले सम्भावित ग्राहकहरूलाई तपाईबाट किन्न र बिक्रीको सम्भावना बढाउन उत्प्रेरित गर्न सक्छ।अनलाइन उत्पाद रिटर्नले धेरै इ-वाणिज्य ब्रान्डहरूलाई ग्राहक वफादारी हासिल गर्न र तिनीहरूलाई थपको लागि फिर्ता लिन तयार बनाउन मद्दत पुर्याएको छ।
अनलाइन रिटेल रिटर्न ई-कॉमर्सर्स व्यवसायमा सामान्य हो, र ग्राहकहरूले उत्पादहरू फर्काउँनेछन्उनीहरूले समय समयमा समय लिइन्। तपाईंको ग्राहकले उत्पादनलाई क्षति पुर्याउन फर्काउने निर्णय गर्न सक्छवा राम्रोसँग फिट छैन। ग्राहकहरू तीन उत्पादनहरूमा लगभग एक फर्काउँछन्। वास्तवमा,धेरै खरीददारहरूले खरीद गर्नु अघि फिर्ती नीतिको समीक्षा गर्छन्।
यदि सम्भावित ग्राहकहरूले जान्दछन् कि उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा सामान फर्काउन सक्छन्, उनीहरूले अधिक सम्भावना पाउनेछन्फेरि आऊ। वाल स्ट्रीट जर्नल द्वारा आयोजित अध्ययनले पुष्टि गरेको छग्राहकहरू उच्चतम रिटर्न दर भएका छन्। तपाईंको यो नीतिको लागी कार्यान्वयनअभ्यासले तपाईंलाई ठूलो बिक्री र व्यवसायका अवसरहरू हटाउनदेखि बचाउन मद्दत गर्नेछ।
9। तपाईंको होम पेजमा उत्पादन प्रदर्शन गर्नुहोस्
तपाईंको गृह पृष्ठ तपाईंको ईमिक्सर वेबसाइटको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग मध्ये एक हो त्यसैले तपाईले गर्नु पर्छग्राहकहरूलाई व्यस्त राख्न प्रयोग गर्नुहोस्। उत्तम बिक्रेता उत्पादनहरू देखाउनुहोस् ताकि संभावित ग्राहकहरूस्पष्ट रूपमा तिनीहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सम्भव छ कि तपाईंको ईकमर भण्डारमा कुनै पनि पसलअन्य पृष्ठहरू मार्फत अन्य उत्पादनहरू हेर्न गृह पृष्ठ भ्रमण गर्न निर्णय गर्न सक्दछ। त्यसोभए तपाईंको राख्नुहोस्घरको पृष्ठमा सबैभन्दा लोकप्रिय उत्पादनहरू अनिवार्य रूपमा बिक्री बढाउँछ।
10। एकाधिक वितरण विकल्पहरू प्रस्ताव गर्नुहोस्
ग्राहकहरूलाई धेरै डिलिवरी विकल्पहरू प्रदान गर्नाले तपाईंको बिक्री बढाउँछ। आश्चर्यजनक कुरा,तर जो व्यवसायहरूले गुणात्मक उत्पादनहरू बेचेर व्यवसायलाई असाधारण अनलाइन अनुभव प्रदान गर्दछप्रायः डिलीवरीको बेला यो असफल हुन्छ। यदि तपाईं ग्राहकहरूबाट खरीद गर्न उत्प्रेरित गर्न जाँदै हुनुहुन्छतपाईं धेरै वितरण विकल्पहरू प्रस्ताव गर्न तयार हुनुहुनेछ। यस्तो उपयोगी विपणन रणनीतिकार्यान्वयन गर्न सजिलो छ, तर यसले तपाईलाई सम्भावित ग्राहकहरूलाई हराउन र उनीहरुलाई तपाइँको प्रतियोगीहरूमा जाने रोक्न मद्दत गर्दछ।
यो स्पष्ट छ कि इन्टरनेटले मानिसहरुलाई खोज र उत्पादहरू किन्न खोजेको छ। यीडेस्कटप वा मोबाईल उपकरणको साथमा तपाईंले केहि पनि अनलाइन किन्न चाहानुहुन्छ। मानिसहरू हुन्बढ्दो रूपमा ईकमर्स व्यवसायमा सामेल हुन तयार छ। बढ्दो गतिको साथ राख्नअनलाइन खरीदारी को लोकप्रियता, तपाई द्वारा प्रदान गरिएको पेशेवर सहायता को संदर्भ मा स्वागत छ सेल्टल्ट डिजिटल सेवाहरु ।
. - editor de videos yahoo